merolagani - धनी व्यक्तिहरूको सोच प्रष्ट्याउने पुस्तक ‘हाउ रिच पिपल थिंक को सारंश
धनी व्यक्तिहरूको सोच प्रष्ट्याउने पुस्तक ‘हाउ रिच पिपल थिंक को सारंश
Apr 28, 2021 06:20 PM Merolagani
हरेक हप्ता अर्थसँग सम्बन्धित पुस्तकहरुको सारंश लिएर आउने क्रममा गत सातादेखि हामीले स्टिभ साइबोल्डद्वारा लिखित पुस्तक ‘हाउ रिच पिपल थिंक’ को सारंश प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। आज सोही पुस्तकको सारंशको दोस्रो भाग लिएर उपस्थित भएका छौँ।
केही मानिसहरु पैसाको बारेमा चिन्तित भएर आफ्नो मानसिक शक्तिको केही हिस्सा खेर फाल्छन्, जबकी च्याम्पियनहरु दैनिक धनी बन्नका लागि निडरतापूर्वक केन्द्रित हुन्छन्।
‘सम्पूर्ण अमेरिकाको प्राथमिक आवश्यकता भनेको पैसा बनाउनु हो–त्यसपछि पैसाबाट पैसा बनाउने–त्यसपछि धेरै पैसाबाट अझ धेरै पैसा बनाउने’–पल इर्दमन।
सँधै पहिला स्पष्ट, सरल, रैखिक समाधानको लागि हेर्नुहोस्। यदि त्यसले काम गरेन भने अस्पष्ट, असरल र गैर रैखिक समाधानको लागि दिमाग लगाउन शुरु गर्नुहोस्।
मध्यम वर्गहरु धन बनाउन कडा परिश्रममा विश्वास गर्छन्..... विश्व वर्ग लाभले धन सिर्जना गर्छ भन्ने विश्वास गर्छन्।
यदि कडा परिश्रम वित्तीय सफलताको सुत्र हुँदो हो भने, हरेक ज्यामी र वेटरहरु धनी हुन्थे। धनीहरु रणनैतिक रुपमा आफ्ना प्रयासहरु आफ्नो व्यवसायको ति क्षेत्रहरुमा केन्द्रित गर्छन्।
औषत मानिस जीवनको हितोपदेश स्लट मेसिनमा खेलिरहन्छ जबकि धनीहरु स्लट मेशिनको स्वामित्व ग्रहण गर्दछ।
लिभरेज भएका मानिसहरु कम लिभरेज भएका मानिसहरुमाथि प्रभुत्व हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा, जसरी मानिसहरु विभिन्न उपकरणहरु प्रयोग गरी जनावरहरुमाथि कब्जा जमाएको छ, त्यसैगरी, जो व्यक्तिसँग लिभरेजको उपकरण हुन्छ, उनीहरु अन्य व्यक्तिहरुमाथि नियन्त्रण गर्दछन्। सामान्य भाषामा भन्दा, ‘लिभरेज शक्ति हो’ रोबर्ट कियोसाकी भन्छन्।
कडा परिश्रमबारे भएको तपाईको सोचलाई सीमित गर्ने कुनै पनि कुराहरुलाई छोड्ने निर्णय गर्नुहोस्, र अधिक सफल बन्नको लागि कसरी लिभरेजलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्न शुरु गर्नुहोस्।
मध्यमवर्गहरु सोच्छन् कि पैसा सबै नराम्रो कुराहरुको जड हो..... वल्र्ड क्लास गरिबीलाई सबै नराम्रा कुराको जड मान्छन्।
एक औषत व्यक्तिलाई यो विश्वास दिलाइन्छ कि धनी व्यक्तिहरु या त भाग्यमानी हुन्छन् या धोकेबाज।
वर्ल्ड क्लास विचारकहरु सचेत रुपमा पैसाले उनीहरुको सर्वोत्तम हितको लागि सेवा गर्छन र उनीहरुलाई पर्याप्त रकम विकास गर्न मद्दत गर्दछ भन्ने विश्वास सिर्जना गर्दछन्। एक औषत व्यक्तिालाई धनी हुनबाट रोक्ने उसको बौद्धिकता या शिक्षा होइन, यो मध्यम वर्गको विश्वमा बाँच्नका लागि सँधै संघर्ष गरिरहनु पर्छ भन्ने सोच हो।
यदि तपाई विश्वस्तरिय सम्पत्ती चाहनुहुन्छ भने ती विश्वासको आधारमा व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बुझेर धनी व्यक्तिहरुको विश्वासको नक्कल गर्नुहोस्। जब मानिसहरु जवाफको लागि बाहिर खोजिरहेका हुन्छन्, ठूला मानिसहरुलाई थाहा हुन्छ कि सम्पत्ती भित्रबाट शुरु हुन्छ।
‘पैसालाई जसले नराम्रो कुरा भन्छ ति मानिसहरुबाट टाढा हुनुहोस्। त्यो वाक्य लुटेराहरुको वाक्य हो,’ एनि रान्ड।
आफ्नो लक्ष्यमा गौरव गर्ने निर्णय गर्नुहोस्, र जसले धनी हुनु गलत हो भन्छ त्यसता व्यक्तिहरुलाई वेवास्ता गर्नुहोस्। मध्यम वर्गहरु धनी हुने एक विशेषधिकार हो भन्ने सोच्छन्। धनीहरु धनलाई नै सही मान्छन्।
औषत व्यक्तिहरु धनी बन्नुलाई भाग्यमानी व्यक्तिहरुलाई दिइएको विशेषाधिकारको रुपमा मान्छन्। विश्व वर्गहरुलाई थाहा छ कि पूँजीवादी मुलुकमा उनीहरुलाई धनी हुने अधिकार छ यदि उनीहरुले अरुका लागि ठूलो मूल्य सिर्जना गर्न सक्छन् भने।
धनी व्यक्तिहरु विश्वास गर्छन् कि यदि उनीहरुले अरुका लागि जीवन राम्रो र सरल बनाइदिए भने धनी हुनु उनीहरुको अधिकार हो। उनीहरु जहिले पनि राम्रो जाल बनाउने बारेमा सोचिरहन्छन् र अक्सर भौतिकवादी, आत्म अवशोषित र लोभी हुनाले तिरस्कृत हुन्छन्।
धनीहरु सोच्छन् कि उनीहरुले भ्यालु सिर्जना गरिरहेकाले धनी बन्ने उनीहरुको अधिकार हो। त्यसैले फुटबल गेम हेर्ने, ब्याटिङ्ग औषत स्मरण गर्ने र भिडियो गेम खेल्नुको सट्टा उनीहरु धन सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावित नयाँ विचारहरुमा केन्द्रित हुन्छन्।
मध्यम वर्गहरु पैसालाई जटिल रुपमा बुझ्छन्...... धनीहरु सामान्य रुपमा।
मानिसहरुको एक जमात छ जो पैसा बनाउनु रहस्यमय छ भन्ने विश्वास गर्छन्। विश्वस्तक विचारकहरुलाई थाहा छ कि पैसा आईडियाहरुबाट बग्छ। उनीहरुलाई थाहा हुन्छ कि बजारमा जति उनीहरु भ्यालु सिर्जना गर्छन्, त्यति नै धनी हुन्छन्।
धनी व्यक्तिहरु अनन्त सम्भावनाहरुबाट पैसा बनाउने दृष्टिकोणले हेर्छन् र आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न डराउदैनन्। चाहे उनीहरु जति पटक नै असफल किन नहोस्, सफल नभएसम्म लागिरहन्छन्।
धनी हुन त्यहाँ कुनै रहस्य छैन, त्यो सीमित सोचले अधिकांश मानिसहरुलाई प्रयास गर्न बाट पनि रोकिरहेको छ। के यसले तपाईलाई कहिले रोकेको छ? के यसले अहिले रोकिरहेको छ?
‘सफल व्यक्तिहरु पैसा बनाउँछन्। यो होइन कि पैसा बनाउने मानिसहरु सफल हुन्छन्, तर ती सफल व्यक्तिहरुले पैसालाई आकर्षित गर्छन्। त्यसले उनीहरुले जे गर्छन्, त्यसमा सफलता ल्याउँछ।’ वेन डायर
Jun 16, 2021 07:12 PM
केटीएमले बढायो सबै मोटरसाइकलको मूल्य, एउटै मोटरसाइकलमा ९५ हजारसम्म मूल्य वृद्धि
Jul 30, 2021 01:01 PM
नेपाली बजारमा युवा वर्गको सबैभन्दा बढी रोजाइमा पर्ने केटीएम मोटरसाइकलको मुल्य भारी रुपमा बढेको छ । साउन १५ गतदेखि लागू हुने गरी केटीएमले नेपालमा मुल्य बढाएको हो । नेपालका लागि केटीएम मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले अधिकांश मोडलकाे मुल्य वृद्धि गरेको छ ।
Jul 30, 2021 12:23 PM
श्रृजनशील लघुवित्त ऋणात्मकबाट धनात्मकतर्फ उन्मुख हुँदै, कसरी भयो सम्भव?
Jul 30, 2021 11:54 AM
शुक्रबार पनि बढ्यो सुन र चाँदीको भाउ
एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित ३ योजनाको लाभांश घोषण
Jul 30, 2021 10:48 AM
लक्ष्मी इक्विटी फण्डको मूल्य समायोजन